Sida loo demiyo "boggaga soo noqnoqda" ee Safari ee iOS 9 | Wararka IPhone
Sida loo joojiyo "boggaga soo noqnoqda" ee Safari ee iOS 9
Markii aan Safari ka fureyno macruufka 9, ama si fudud markaan tab cusub fureyno, waa run in sida caadiga ah aan hoosta ka tusno liiska websaydhada sida joogtada ah loo booqdo si aan si dhakhso leh ugu helno. Tani waxay noqon kartaa mid waxtar leh, waa run, laakiin waxaa jira kuwa sababo kala duwan awgood oo aan doorbideynin inaan la shaacinin websaydhada ay si isdaba jooga ah u booqdaan, maadaama ay arki karaan qof kasta oo Safari ugu adeegsada qalabkooda. Noocyadii hore, waxaan ku helnay Jailbreak tweak oo noo ogolaaday inaan qarino degelladan dhowaan booqday, si kastaba ha noqotee, macruufka 9 wuxuu leeyahay xulashadan goobaha Safari, curyaaminta bogagga soo noqnoqda waa mid aad u fudud.
Taasi waa sax, macruufka 9 iyo Safari hadda waxaan fursad u leenahay inaan ka takhalusno goobahan sida joogtada ah loo booqdo si deg deg ah oo fudud oo ka mid ah goobaha Safari, waana kuwan tallaabooyinka gaarka ah ee sida ugu dhaqsiyaha badan looga takhalusi karo shaqadan in badan oo ka mid ah ay dhibsadaan oo aan fiicnayn.
1 Jooji "boggaga soo noqnoqda" ee Safari ee iOS 9
2 Sidee mid mid looga tirtirayaa goobahan
Jooji "boggaga soo noqnoqda" ee Safari ee iOS 9
Waxaan fureynaa barnaamijka macruufka ah ee loo yaqaan "iOS Settings".
Waxaan dhex mushaaxeynaa liiska illaa aan ka galeyno Safari, waan galeynaa.
Meelaha guud waxaan ka heli «Goobaha sida joogtada ah loo booqdo«.
Waxaan joojineynaa badhanka haddii aan rabno inaan joojino aragtida degelladan joogtada ah.
Ma jiraan wax hagaajin ah ama dhibaatooyin ah, dhab ahaantii ma sahlanaan karto. Hadda markaan furayno tab cusub oo Safari ah waxaan heli karnaa waxyaabaha aan jecel nahay ama Calaamadaha, laakiin ma aha booqashooyin si joogto ah loo booqdo.
Sidee mid mid looga tirtirayaa goobahan
Waxaan sidoo kale fursad u leenahay inaan baabi'ino kaliya mid ka mid ah, tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan sii heyno kuwa kale oo aan ilaalino shaqada, si kastaba ha noqotee, waxaan ka helnay mid ka mid ah sababa jira awgood oo aanan dooneynin inuu jiro, xalkuna waa sahlan yahay, farta ayaan uga tagaynaa meesha aan rabno inaan baabi'ino, iyo Badhanka macnaha guud ayaa soo bixi doona oo noo oggolaan doona inaan tirtirno dhaqso iyo si fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo joojiyo "boggaga soo noqnoqda" ee Safari ee iOS 9
Ma shaqeyneyso, way sii muujinayaan, xitaa tabs cusub
Sida loo hagaajiyo qaladka -54 ee iTunes
Xal xeel dheer si looga fogaado inaad lumiso qalinka Apple